To: बालबालिकाहरुमा लुकेको संबेदनशील समस्या ‘थाइराइडको समस्या’
डा. बिनोद कुमार साह - बिश्वमा करिब २०० मिलियन भन्दा बढी मानिसहरुमा थाइराइडको कारण बिरामी हुने गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कहरुले देखाएका छन्। यो समस्या मध्ये ५० प्रतिशत बिरामीहरुको जनचेतना नभएको देखिएको छ। बिश्वको जनसंख्याको करिब ३० प्रतिशत मानिसहरु आयोडिन कमी भएका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गरेको अध्ययनहरुले देखाएको छ।
श्रीभक्त खनाल - (तिब्बतबाट नेपाल आएपछि गोम्पोले पुनः विवाह गरे। सन् २००८ मा पनि मैले उनलाई भेटेको थिएँ। तिब्बती संस्कारमा मृतक व्यक्तिको नाम नभन्ने चलन छ। त्यो कुरा मलाई त्यतिबेलासम्म थाहा थिएन, थाहा भएको भए सोध्ने पनि थिइनँ। तिब्बती संस्कार थाहा पाएपछि मैले तिब्बतीसँग कुरा गर्दा नाम बताउन मिल्ने भए मात्र बताउनु होला भन्ने गरेको छु। गोम्पोले मृतक आमा र छोरीको नाम बताउँदा आँखाभरि आँसु लिएका थिए। मैले उनको पुरानो घाउ कोट्याएर दुःख दिएँ। मेरै कारण टलपलाएको थियो गोम्पोको आँखामा आँसु। क्षमा गर साङ्गे गोम्पो!)
निष्प्रभ सजी - मलाई सबैभन्दा बढी आनन्द चराहरू खिच्दा मिल्छ। यिनै चराहरूले मलाई सम्झाइरहन्छन् कि, म उड्न त उडेँ तर, गुँड फर्किएको छैन। चराहरूले पनि बसाइ सर्छन्। सबै चराहरूको फर्किने ठेगाना हुँदैन। सिमाना नै नभएका चराहरूसँग पनि जीवन संघर्षका कथाहरू छन्। आफूलाई बोकेको डुंगा पल्टिँदा जसरी मर्छन् हरेक दिन शरणार्थीहरू, चराहरू पनि आकाशबाटै फुत्त झर्छन् धर्तीमा आफ्नो जीवनको गती गुमाएर।
इस्माली - पहाडको मान्छे, मधेसको औलो गर्मी! गरिबीले गालेको छँदै थियो, त्यसमाथिको औलो गर्मी। थल्यायो हुतकुमारीलाई। ‘कालेका बा, मेरो त लेखान्त सकिएजस्तो भो। दिदी, यो काले तिम्रो जिम्मा!’ चोला उठ्यो आमाको। बालवयमै टुहुरा भए श्यामप्रसाद। घरमै साक्षर बनाएर भाषा पाठशालामा भर्ना गरिदिएपछि किशोर छोरालाई घरव्यवहार सुम्पेर पिता जोगनाथले पनि बाटो तताए। आर्थिक अभावले पहिलेदेखि नै फिटफिटी पारेर पाठशालाको पढाइ हापिसकेका उनी हातमुख जोर्ने मेसोको खोजीमा भाउन्निए। वीरगञ्ज–अमलेखगञ्ज रेल (एन जी आर रेलवे, नेपालको पहिलो रेलसेवा) मा डब्बाडब्बा चहार्दै किताब, पत्रिका बेचे, ट्युसन पढाए, चिठ्ठीपत्र लेखिदिने/पढिदिने पनि गरे।
सोमेश वर्मा - दिल्लीमा एकपटक एक अंग्रेज अधिकारीले गालिबलाई सोधे, 'तिमी मुसलमान हौ?' गालिबको जवाफ थियो, 'आधा'। अंग्रेज अचम्ममा पर्यो। सोध्यो, 'आधा कसरी?' गालिबले प्रष्ट्याए, 'रक्सी पिउँछु तर सुँगुर खान्न।'
जुना घर्ती - राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, समामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्की भएको मुलुकमा महिलाहरू नगर प्रमुख वा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुन किन सक्दैनन्? महिलालाई उम्मेद्वार किन नबनाउने?
राज महर्जन - स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधि राज्यको विकेन्द्रीकरणका सम्बाहक हुन्। लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप बढी भन्दा बढी जनतासम्म राज्यको उपस्थिति जनाउनु त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको प्रमुख दायित्व हो। स्थानीय निकायका निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको आफ्नो निकायको व्यवस्थापन गर्नुका साथसाथै विकासका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने र केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारसँग समन्वय गर्ने दोहोरो र महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
मेनुका थापा - तिम्रो दुस्साहस देखेर आज पनि कथित परिपक्व र अनुभवीहरूको पैतालामुनिको जमिन भासिएको छ, सायद। तिमीलाई पनि भुरी र फुच्ची भनेर तिम्रो मनोबल कमजोर पार्न खोजिँदैछ, सायद। तिमीलाई पनि बरु बिहे गर बस नानी भनेर अपहेलना गरिँदैछ, सायद। दुस्साहसी भनेका तिनै हुन्, जसको मनोबल चट्टानझैं अटल हुन्छ।
मनिता चौलागाइँ - माया गर्नेलाई अनौपचारिक रूपमा, एकदम नजिक भएकालाई 'तिमी' भन्ने चलन छ। हाम्रो समाजमा ठूलाले सानालाई तिमी भन्न सकिने खालको संस्कार छ। अग्रजले, एकदम हदसम्म चिनाजानी भएकाले, समकालीनले तिमी भन्नु त ठिकै हो। तर, एकदम नचिनेको मान्छेले पनि केटी देख्यो भने सोझै तिमी भन्छ। मलाई जसले चिनेकै छैन उसले किन तिमी भन्ने? कसैले हेर्दैमा म सानी देखिएकै आधारमा बिना परिचय किन तिमी भन्ने?
खेम लामिछाने - 'म जुन देश मा जन्मेँ, जुन ठाउँमा हुर्के त्यो अहिले अर्कै देश भैसकेको छ। त्यो देश जानका लागि न म सँग त्यो देशको पासपोर्ट नै छ न भिसा। म त्यहाँ जान चाहँदा चाहँदै पनि सक्दिन, आफन्तलाई भेट्न सक्दिनँ, अहिले म देशविहिन नागरिक हुँ। म चाहेर पनि पछिल्लो ३० वर्षदेखि आफू जन्मेको स्थानमा फर्कन सकेको छैन। ती व्यक्तिहरु भाग्यमानी हुन्, जसको आफ्नो देश हुन्छ।’
यमुना अर्याल - धेरै मान्छे रेस्टुरेन्टमा जाँदा मेनु हजारचोटि हेर्छन् तर अन्त्यमा त्यही ममः अर्डर गर्छन्। अहिलेको निर्वाचनमा त्यस्तो नहोस्। नयाँ अनुहारले स्थान पाओस् भन्ने मेरो सदिक्षा छ।
अधिवक्ता सतिश कुमार शर्मा - न्यायको खोजीमा भौतारिरहेका वैदेशिक रोजगारका पीडितलाई सर्वसुलभ रूपमा न्याय प्राप्तीको लागि तत्कालै वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारका उजुरी र मुद्दाहरू वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतका शाखाहरू ७५ जिल्लामा स्थापना गरी त्यहिबाट उनीहरूको उजुरी उपर सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
दीपेन्द्र बज्राचार्य - नेपाली फोटोपत्रकारिता भनेजस्तै विकास र उन्नति नहुनुमा नेपाली फोटो पत्रकारहरुले जति सुन्दर तस्बिर कैद गर्छन् त्यस्तै अनुरुपमा फोटो क्याप्सन (फोटो विवरण) नलेखेर हो। उनीहरुलाई लाग्छ कि लेख्नु भनेको लेखक पत्रकारहरुको काम हो। त्यसैले त्यो लेखाइ गलत भैदिन्छ जब क्याप्सन लेखकले फोटोपत्रकारको नजरले हेर्न सक्दैन।
सुमना श्रेष्ठ - काठमाडौं! आफैं भित्र के छ? अवस्य नै धेरै छ। काठमाडौं मेरो लागि धेरै हो। यसलार्इ राम्रो बनाउन प्रतिज्ञा गर्ने र परिवर्तनका सम्वाहक बन्न खोज्ने मानिसहरूका लागि पनि यही नै सत्य हो, कुनै पनि व्यक्तिका लागि उसको नाम नै सबैथोक हो। काठमाडौंका लागि त्यो अझ बढी हो। तपाईँ आफूलार्इ विवेकशिल वा एमाले, काँग्रेस, माओवादी, साझा, हाम्रो यो वा त्यो अन्य दर्जनौं नामले पुकार्नुहोस्, के तपाईँको काठमाडौं वास्तवमै मेरो भन्दा फरक छ? तिनीहरू भन्छन् कि युवाहरू तेज, लचिलो र दिन चाहने हुन्छन्। तर नेपालका नयाँ राजनीतिक पार्टीहरूलार्इ के भएको छ, मलार्इ थाहा छैन । कुनै पनि नयाँ राजनीतिक पार्टीसँग जित्नका लागि चाहिने कोष, युवाहरूको सहयोग, अनुभव जस्ता सबै कुराहरू पर्याप्त छैनन्। के हामी सबै मिलेर एउटा समूह बनाउन सक्तैनौं जहाँ हामीसँग पर्याप्त कोष, कार्यान्वयन गर्न सक्ने युवाशक्ति र बौद्धिक वार्ताकारले भरिपूर्ण रहुन् अनि त्यहाँ उत्कृष्ठताका लागि फरक हुन सक्छ।
गोबिन्द मरासिनी - यसको अर्थ यो नमानौं कि आमाको फोटो फेसबुकमा राख्न पनि नपाउने? पक्कै पनि पाउने। तर आफूले आमालाई कतिको माया गर्छु, बिरामी पर्दा कतिको हेरचाह गर्छु, बृद्ध अवस्थामा कतिको माया र स्नेह गरेँ, आमालाई मिठो मसिनो खान दिएँ कि दिईन लगायतका कुराहरु ख्याल गरेका छौं? एकपटक स्मरण गरौं, हामीमध्ये कतिले फेसबुकमा धेरै खाले ‘क्याप्सन’ सहित तस्बिर राखेका आमाहरु कति बृद्धाश्रममा होलान्, कति खान नपाएर रत्नपार्कमा हात फैलाउन बाध्य होलान्, कति उपचार खर्च नभएर अस्पतालमा जीवन र मृत्युको दोँसाधमा लडिरहेका होलान्।
नारायण गुरूङ - पुननिर्माण नभएको हैन, भएकै छ। बस्ती स्थान्तरण गर्नुपर्ने बाध्यता भएका गाउँहरू बाहेक, अरू ठाउँहरूमा करिब करिब आफनो किसिमले पुननिर्माण भैसकेको र धमाधम भैरहेको अवस्था छ। बिडम्बना यी पुननिर्माण बस्तीमा, घरहरू सरकारी मापदण्ड अनुसार भने बिरलै बनेका छन्। यसैले सरकारको वा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको आकडामा यी घरहरु पुननिर्माण भएको देखिदैनन्। अनि बास्तविकता के पनि हो भने अब सरकारले चाहेर पनि यी पुननिर्माण भैसकेका घरहरुलाई सरकारी मापदण्ड अनुसार बनाउन प्राय: असम्भव जस्तै छ।
मोहन मैनाली - २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालका धेरै ठाउँमा भुइँचालो आयो। लाङटाङ उपत्यकामा भने भुइँचालो मात्र आएन। वैज्ञानिकहरुका अनुसार, भुइँचालो आउने बित्तिकै लाङटाङ गाउँको उत्तरमा रहेको हिमालको सात हजार मिटर अग्लो डाँडाबाट हिउँपहिरो झर्‍यो। साढे दुई किलोमिटर झरिसकेपछि यसले सोहोरेर ल्याएका हिउँ र ढुङ्गामाटोलाई हावाको शक्तिले हुर्याएर लाङटाङ गाउँलाई पुर्दै खोलासम्म पुर्‍यायो। त्यसो गर्दा यसले ७० लाख घन मिटर जति हिउँ तथा ढुङ्गा माटो लाङटाङमा थुपार्‍यो। यति ढुंगामाटो र हिउँ १० वटा फुटबल मैदानमा राखेको भए १०५ मिटर (धरहराभन्दा झण्डै दोब्बर) अग्लो पहाड बन्थ्यो।
विकास आले - खिड्कीबाट बाहिर हेरे। केही देखिएन। टर्च बालेर हेरेँ सेम रिजल्ट। टोइलेट पसेँ। त्यहाँ कुनामा सेतो हिउँजस्तै देखे। रूमबाट सोझै निस्किएर मूलढोका बिस्तारै उघारेँ। मास्तिरबाट खसेको सानु हिउँको ढिस्कनाले चिण्डे तालुलाई फुस्स छोयो। टर्चले बाहिर चारैतिर नियाले। म हेरेको हेर्यै भएँ। एकचोटी आँखा मिचेँ। चाँदीको स्वर्गमा एकदुई पाइला चालेँ। टेक्नु पनि माया लाग्नेखाले!
भानु बोखिम - लिम्बु संस्कारअनुसार धान नाच नाचियो। धेरै केटीहरुसँग धान नाच्ने नाममा चिनजान गरियो। अनि उट्पट्याङ गफ हानियो। यसरी दुई दिन धान नाच्ने अनि ख्यालठट्टा गर्ने नाममा राई साथीको मन त एउटा युवतीसँग आकृष्ट भएछ। सायद ऊ आफ्नो भावना पोख्ने बााटो खोजिरहेको थियो। यही उपायको खोजीमा तेश्रो दिनको साँझ उसले एउटा प्रस्ताव राख्यो। प्रस्ताव थियो– दुवै मिलेर त्यो गाउँकी दुइटी केटीलाई प्रेमपत्र लेखेर छोड्ने।
कृष्ण प्र. पौडेल - हुनत यसलाई केही नगर्ने भन्दा, गर्ने नै बढी विवादमा हुन्छन् भन्न पनि सकिएला तर कुरा त्यति भनेर मात्र अब ढाट्न र टार्न हुँदैन। सामुदायिक विकास तथा जिविकोपार्जनका नाममा संघसंस्थाहरुले कहिलेसम्म कनिका छर्ने हो? अब यस्को जवाफ नदिई धरै छैन।
प्रतिमा भट्ट - आजसम्म हामी नेपाली जनताले जेष्ठ नागरिकलाई नै देशको अगुवा बनायौं। देशको विकास निर्माणको बागडोर उनीहरूकै हातमा सुम्पियौं। तर, खै त के पायौं हामीले, राजनीतिक अस्थिरता र अन्यौल सिवाय? दुई छाक हातमुख जोर्न लालाबाला रुवाएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता सिवाय?
जीवन श्रेष्ठ - सन् २००३ को निर्वाचनमा फायार्दो दुई लाखभन्दा बढी मत ल्याई मेयरमा निर्वाचित भए। यो परम्परागत दलका उम्मेदवारको तुलनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी मत थियो। उनको चारवर्षे कार्यकालले मेडेलिनलाई हत्या-हिंसा र पाब्लो एस्कोबारको सहरबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको सहरका रुपमा स्थापित गरायो।
- बिशाल सिलवाल - अहिले फेरि देश चुनावमय भएको छ। स्थानीय निर्वाचन ढोकैमा आइपुगेको अवस्था छ। तर यसपाली भने गत चुनावजस्तो बिडम्बना छैन। गणतन्त्र नेपालको नयाँ संबिधानलाई संस्थागत गर्ने यस चुनावमा हाम्रो अगाडि केही नयाँ र बैकल्पिक शक्तिहरु देखा परेका छन्। केही नामले मात्र नयाँ शक्ति तर उही पुरानै ढाँचाका नेताहरु भएका छन भने केही कामले नयाँ शक्ति मानिएका हुन्। नामै किटेर भन्नुपर्दा अघिल्लो पार्टी बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टी हो भने पछिल्लो पार्टी बिबेकशील नेपाली दल हो। हालै आफुलाई अर्को बैकल्पिक शक्तीको रुपमा आफुलाई प्रश्तुत गरेको छ साझा पार्टीले। अब फेरि बेला आएको छ हामीले संस्थागत परिवर्तनका पक्षमा मतदान गर्न र यो पाली हामीले एक्पल्ट नयाँ बैकल्पिक शक्तीलाई विश्वास गर्नैपर्छ।
सुधन सुवेदी - मलाई यो जीवनको सुन्दर उपहारका रुपमा मेरा जीवनसाथीलाई प्राप्त गरेँ, अहो! म कति भाग्यमानी, हेर्दाहेर्दै १० वर्ष कटेको पत्तै भएन। बधाई छ । यस्तै सन्देश एकाघर मात्र होइन एउटै कोठामा बस्ने श्रीमान्–श्रीमतिको बेलामौकामा पढ्न पाइन्छ । अझ घतलाग्दो कुरो चाँहि सारा संसारले स्टेटस पढेर यो विवाहोत्सवको बारेमा थाहा पाइराख्दा उही स्टेटस लेख्नेले आफ्नो प्राण प्यारो वा प्यारीसँग गएर शुभकामना साट्न चाँहि भ्याउँदो रहेनछ ।
सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ - हामीले मानवता बिर्संदै गएका छौँ। कतै दुर्घटना हुन्छ, तर हामीलाई सेल्फी खिच्न हतार हुन्छ। फेसबुकमा चढाउन र लाइक बढाउन हतार हुन्छ। कहिले हामीले विकासका लागि सेल्फी खिचेनौँ। विकासका लागि आवाज उठाएनौँ। किनकि हामी कहिल्यै पनि नागरिक भएनौँ। सबै पार्टीका भयौँ। यो दल, ऊ दल, बहुदल, निर्दल मात्रै भयौँ। अब हामी नागरिक मात्र बन्नुपर्छ।
भुवनहरि सिग्देल - सानेले किक्लिक्क गर्यो। मैले कसेर दुई हथौडा उसको तालुमा बजारेँ। पट्ट टाउको फुट्यो। साने छटपटाउँदै शिथिल भयो। म जिउँदै मरेँ। थच्च भुइँमा बसेँ। मेरो मुखबाट निस्क्यो– ‘यही भयो साने! तेरो इमानदारीको इनाम! अब म जीवनभर कुकुर पाल्ने छैन।’
सोमेश वर्मा - एक सेवकले गालिबलाई सम्झाउने कोशिस गरे, “मिर्जा साहब, घरमा खानेकुरा केही छैन। तैपनि तपाईं रक्सी किन्दै हुनुहुन्छ?” गालिबको जवाफ थियो, “खुवाउने जिम्मा उसको (अल्लाहको) भन्छन्, तर पिलाउने जिम्मा अरु कसैले लिएको छैन। आफैं जोहो गर्नुपर्छ।”
–खगेन्द्र फुयाँल - जनप्रतिनिधि छान्दा स्वतन्त्र व्यक्ति होस् वा सानो राजनितिक दलको नेता नै किन नहोस्, उसमा देश विकासको स्पष्ट खाका छ, क्षमता छ, देशलाई नेतृत्व गर्नसक्ने खुबी छ भने सच्चा नेता ती हुन सक्दछन्।शिक्षाले नै मानिसलाई नयाँ कुराको खोज र त्यसको प्रयोग गर्ने अभिप्रेरणा दिन्छ। विज्ञानको चरम विकास लीला अपार छ। त्यसैले हाम्रो देशको विकास सम्भव छ। यो परम्परावादी चिन्तन भएका नेताबाट होइन दक्ष, सक्षम र शिक्षित मानिसबाट मात्रै सम्भव छ।
रमेश सायन - अप्रिलको झरीमा भिजेको माटोबाट मिठो वासना आउँछ। जताततै स्निग्ध सेतो साकुरा फुल्छ। कोरियाको अनेक ठाउँमा ‘फोतकोत छुक्छे’ (चेरी ब्लोसम फेस्टिभल) हुन्छ। जहाँ एकै दिनमा लाखौं मान्छे पुग्छन्। जीवनतिर फर्केर मुस्कुराइरहेका चेरीलाई साक्षी राखेर भन्छन्, ‘हामी जस्तोसुकै दुःखमा पनि हार्दैनौं। हामी धैर्य गर्छौं। हामी हरदम जीवनतिर फर्कने बाटो खोज्छौं।’